तपाई बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यस्ता हुनेछन् ९ फाइदा - Kathmandu Patra
Home Features तपाई बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यस्ता हुनेछन् ९...
तपाई बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यस्ता हुनेछन् ९ फाइदा
एजेन्सी- पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन्। पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन्। यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पेट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रोगबाट बच्न सकिन्छ। यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ।
बिहान खाली पेट पानी
Previous articleहोसियार, तपाई बिहान उठ्ने बित्तिकै यी चार कुरा खाने गर्नु भएको त छैन ?
Next articleनेपालमा परीक्षण हुन लागेको कोरोना खोपबारे जान्नैपर्ने यी हुन् चार महत्वपूर्ण कुरा